Wararkii ugu dambeeyey duufaanta Irene ee lugta ku walaaqaya Mareykanka+Sawiro – SBC
Wararkii ugu dambeeyey duufaanta Irene ee lugta ku walaaqaya Mareykanka+Sawiro
Todobo gobol oo ku yaal wadanka Mareykanka oo uu ku North Carolina oo ay ka mid tahay magaalada New York ayaa la sheegay inay ku soo wajahantahay duufaanka Irene iyadoo al sheegayu in boqolaal kun oo qof ay ka qaxayaan shan degmo oo ka mid ah magaalada New York oo ah magaalada sadexaad ee ugu dadka badan Mareykanka oo ay ku nool yihiin 8.2 milyan (Sideed milyan & laba boqol kun).
Degfmooyinka Brookyln, Queens, Manhatan & Staten Island ayaa ka mid ah meelaha laga qaxay oo lagu tilmaamay in ay saameynta ugu badan ka soo gaari doonto duufaanta.
Duufaanta, dabeylaha & roobabaka is wata ayaa waxay jiraan 140 Km saacadii iyadoo la sheegay in daadku ay kor u kici doonaan ilaa iyo 7 cagood (feet).
1 milyan oo qof ayaa la filayaa inay koronto la’aan noqdaan, waxaa kale oo la xiray sadex dhuun oo gala faras magaalaha gaar ahaan Manhattan iyadoo sidoo kale la sheegay in garoomada diyaaradaha oo uu ku jiro JFK airport albaabada la isagu soo laabay.
Qabiirada duufaanada ayaa sheegay in ay mashaqo culus reebi doonto duufaantan waxaana la sheegay in beri subaxnimada ay dharbaaxi doonto magaalooyin badan oo ay ka mid tahay New York, waxaana la sheegay in tirada dadka ay saameynayso ay gaarayso 65 milyan oo qof.
Magaalooyinka New York, New Jersey, gobolada Virginia, Maryland, North Carolina, Connecticut & Delaware waxaa dhamaan lagaga dhawaaqay xaalad deg deg ah, waxaa kale oo la sheegay in dekada New York ay halis ugu jirto in duufaanta & daadku jaanta mariyaan.
Link Video-ga ka daawo muuqaalada la yaabka & naxdinta leh ee duufaanta.HALKAN KA DAAWO